Hlola i-Great Wall yase-China - World Tourism Portal
Hlola i-Great Wall yase China
Okufanele ukwenze odongeni olukhulu lwaseChina
Iwebhusayithi esemthethweni yezokuvakasha ye-Great Wall of China
Bukela ividiyo ekhuluma ngodonga oluhle lwase China
Hlola Wall Omkhulu wase China edlulela ngasentshonalanga ezifundazweni nakomasipala bonke beLiaoning, Hebei, Tianjin, Beijing, Ngaphakathi Mongolia Isifunda esizimele, iShanxi, iShaanxi kanye neNusxia Autonomous Region ukuya eGansu entshonalanga.
IGreat Wall Wall yase China ingavakashelwa ezindaweni eziningi kanye nobude bamakhilomitha ayinkulungwane. Isimo saso sisuka kokuncono kakhulu kuya ekuwonakalisweni, futhi ukutholakala kalula kuyahluka ngokuqondile kube nzima. Qaphela ukuthi izingxenye ezahlukahlukene nazo ngazinye zinemali yazo yokwamukelwa, isib uma ufuna ukuhamba ngeJinshaling uya eSimatai lapho kufanele ukhokhe kabili.
Umlando we-Great Wall of China
Izilwane zasendle zaseChinese zihlukile, kucatshangelwa zonke izindawo zokuhlala ezahlukene ezitholakala ngobude be-Great Wall. Ukusuka ihlosi elincane laseSiberia elingasenyakatho-mpumalanga kuya eGanda Giant Panda evikelwe futhi engavamile ehlala eningizimu yeGansu, iSichuan, neShaanxi, awusoze wazi ukuthi yini ongayibona ngosuku olunikeziwe.
Izilwane ezincelisayo zasendle zingatholakala enyakatho, njenge-Manchurian weasel, amabhere ansundu namnyama, i-pika yasenyakatho ne-mandarin vole. Izinhlobo ze-Deer zifaka i-Sitka deer, i-roe deer kanye ne-deer ekudala yafunwa okudala yaqala ukusebenza, esetshenziswa kakhulu emithini yase China.
Izinyoni zesifunda zifaka ama-pheasants ahlukahlukene, i-grouse emnyama, i-pine gronesiaak, izinkuni ezahlukahlukene, idada le-mandarin, ne-Fair pitta, inyoni engafani nokufuduka. Ama-cranes ahlonishwa ikakhulukazi eChina. Imifino ejwayelekile, eyedemo, emhlophe-emhlophe, egcotshwe imigwaqo emifushane, futhi enomqhele obomvu konke kwenziwa eChina.
Ungathola izitshalo eziningi zama-tonic kanye noGreat Wall, njenge-ginseng eyinqaba (i-Panax ginseng). Umuthi waseChinese unezinkulungwane eziningi zeminyaka ukuthola nokusebenzisa lezi sitshalo ze tonic ukuze kusizakale isintu.
INyakatho China inazo zonke izinkathi zonyaka ezine futhi zifika ngokuziphindisela. Izinga lokushisa lasehlobo nobusika livame ukufika ngokweqile kwama-degree angaphezu kuka-40 Celsius (105 + ° F) no--20 degrees Celsius (-4 ° F) ngokulandelana.
Yini ukubona. Izindawo ezihamba phambili eziphezulu zeThe Wall of China
Njengoba i-Great Wall yase-China ikhona ohlangothini olude, kunezindawo eziningi zokuyihambela. Uhlu olulandelayo luhlukaniswe yisifundazwe / umasipala.
IBadaling neJuyongguan ziseduze neBeijing, futhi lezi ezimbili ziphakathi kwezingxenye ezigcwele kakhulu i-Great Wall. Ezinsukwini zaphakathi nesonto, iBadaling ayigcwali kakhulu futhi kulula kakhulu ukuyifinyelela (ie, ngaphandle kokuqasha itekisi
Ukuhamba kuseseyinselelo enamagquma amaningi amawa kakhulu, ngakho-ke ungadumali uma uthatha ikhebula emotweni ukhuphuka futhi ubone isixuku esikhulu - uma nje usungena odongeni izixuku zixakile ngokushesha, ngisho nangempelasonto. ungazithola usuwedwa esigabeni sonke sodonga. Ngezinsuku zaphakathi nesonto, kunabathengisi abambalwa abakuxosha odongeni; bahlala endaweni encane yedolobha. Ngaphezu kwalokho, kukhona amabhere welanga ongawadlisa izaqathe edolobheni elincane.
Qiniseka ukuthi ugqoka izicathulo ezifanele njengezicubu ze-tennis noma ama-sneaker. Amatshe udonga enziwe ngawo adilizwe yizigidi zezivakashi ezinjengawe, futhi ashelelayo kakhulu. Uma ugqoka amaflebhu, uzobheka inhlekelele. Ukuhamba ungafake zicathulo noma isicathula izicathulo ezithandekayo bekungeke kukukhathaze kakhulu ngoba amatshe ashisa kakhulu elangeni.
Imoto ekhebula ngaphambi komnyango (ingakuthengisela futhi ithikithi lokungena lokungena eGreater esiteshini). Kanye nokuthatha kancane ukhuphuka, kukubeka endaweni ethule odongeni. Lapho wehla emotweni yekhebula ukujika kwesokunxele kuzokuholela ekungeneni okuvamile. Kepha ijika elifanele lingakunikeza ukuhamba okuhle ngasodongeni isikhashana kuze kube lapho indlela ivaliwe.
Kuthatha i-2-3h ukwenza lonke udonga ngokuya ngomzimba / isimo sezulu / isixuku sakho.
Ebusika, lindela ukulahlekelwa yi-5 ° C phakathi kweBeijing nodonga. Lokhu kuhlanganisa nomoya ovela entabeni, uzokwazisa zonke izingqimba zezingubo ongaba nazo. Abathengisi bazoba lapha ukuzothengisa konke okungenzeka ukuthi ukukhohliwe, yize intengo ingenangqondo. Ngokwengxenye enhle: isixuku sesilula kakhulu, futhi cishe akekho umuntu olandela inani eliphakeme lokuqala. Ilanga lasebusika futhi, uma unenhlanhla, iqhwa lizokunikeza ukubukwa okumangalisayo ezindongeni.
I-Mutianyu idlula kancane kuneBadaling, ibuyiselwe kahle ngokulinganayo, ayinabantu abaningi, futhi inendawo emnyama eluhlaza futhi ebukekayo. Ngokomlando, amaqembu amaningi abavakashela awahambanga lapha, ngakho-ke lokhu kuyindlela engcono kakhulu kune-Badaling. I-Mutianyu ine-gondola yemoto ikhebula ukungena nokuya odongeni (yize ukuhamba ngezitebhisi nakho kungenzeka) nokugibela i-toboggan kwehle! Kufakwa kabi, kepha kuyajabulisa.
Uma, ngemuva kokuphuma emotweni ikhebula, umuntu aphendukela kwesobunxele futhi akhuphuke ngezitebhisi cishe ihora, umuntu angafika odongeni olungaphazanyiswa, oluthi “lwasendle”. Ukusuka ngoMashi 2017, kwakhiwe udonga oluphakeme lwe-60cm embhoshongweni 20 ukuze kudinyazwe indlela. Izimpawu zizokutshela ukuthi izivakashi azivunyelwe kule ndawo yodonga. Akufanele udlule ngaleli phuzu. Indoda ingakucela imali yokuvumela indlela yokudlula, kepha akayona umsebenzi wesikhungo. Akufanele uyikhokhe ukuze idlule kuleli phuzu. Isimo sezwe siyakhula, kunamakhasi akhula ngendlela kanti ezinye izingxenye zonakaliswa kanjalo, umuntu kufanele akhuphuke ukuze aqhubeke. Uyacelwa uqaphele ukuthi ukwamukelwa kwefoni ephathekayo kwehla kakhulu lapha futhi bambalwa kakhulu hhayi abantu abaseduze, ngakho-ke uma kwenzeka kunesimo esiphuthumayo, uzoba wedwa. Amagiya amahle okuhamba ngezinyawo kufanelekile. Iqandisiwe futhi inyibitheke ebusika. Amabhande Wembumbulu.
Uma unentshisekelo futhi kulolu "donga lwasendle" olungaphazanyiswa, indlela enhle yokuhlangabezana nayo iyintaba ukusuka esigabeni seJiankou esiya eMutianyu. Ukuvumela ukuhlola okuningi okujulile kwezindonga nemibhoshongo engafinyeleleki engagcinwanga, futhi kukuvumela ukuthi wehle ezitebhisini zesigaba esibuyiselwe esikhundleni sokukhuphuka okude okunzima. Abanye banikela ngamaphakeji wokuvakasha aqondiswa wedwa kubandakanya nokuhamba ukusuka eBeijing kuyiwe eJiankou kanye nokuphuma eMutianyu ukubuyela eBeijing.
Ngoba izincwadi zokuqondisa zolimi lwesiNgisi manje zincoma uMutianyu ngaphezulu kweBadaling njengoba kunabantu abaningi futhi kungagugi kakhulu, izinkampani ezimbalwa zokuvakasha zishintshele eMutianyu njengengxenye yabo yeGreat Wall ekhethiwe yokuhambela kwabo eChina. Uma kungenzeka, zama ukubhuka uhambo lwamaqembu ngokuvakasha kweMutianyu njengengxenye ebalulekile. Lokho kuzohlinzeka ngesipiliyoni esikahle kakhulu nesingenamthungo, ngoba abaqeqeshi bezimoto ezincane zabavakashi abanamaphepha afanele bangakuthatha basuke ngqo ehhotela laseBeijing baye endaweni encane yokupaka esiseduzane nesiteshi se-cable car base. Umshayeli uzolinda nomqeqeshi wezimoto ngenkathi umhlahlandlela wakho wokuvakasha uthatha iqembu lakho uya e-Great Wall, lapho-ke konke sekuqedile, ubuyela kumqeqeshi wezimoto bese ubuyela ngqo eBeijing.
Ngaphezu kwalokho, ikhebula imoto eya odongeni ibiza okungaphezu kokungena kodonga. Le nketho iyona ehamba phambili; kufanele ugcine amandla akho okuhamba ngaphezulu kodonga, olude kakhulu.
Kungenjalo i-20-30 min. ukukhuphuka intaba ngezinyathelo ehlathini kumahhala. Kodwa-ke ukukhuphuka kuyenyuka impela, futhi akunikezeli ukubukwa uze ufike odongeni olukhulu uqobo. Uma ungesabi ukuhamba endaweni ethile ehlubukayo, futhi ubambe kancane ezicathulweni zakho, qhubeka ngasesigabeni esibuyiselwe ikhanda bese uphokophela embhoshongweni wendawo wokubheka ophakeme kakhulu. Uzovuzwa kakhulu ngomzamo wakho!
Kunezimoto ezimbili ezihlukene zekhebula eMutianyu ezisetshenziswa yizinkampani ezahlukene. Enye yemoto ikhebula ukufika engxenyeni ephezulu yodonga olukhulu; elinye isitulo siphakamise kwelinye iphuzu odongeni lapho ungangena khona phansi. Baqala cishe endaweni efanayo ekungeneni kwendawo; kepha basebenza ngezindlela ezihlukile.
Qaphela ukuthi ukuhamba phezulu koDonga Olukhulu kufaka inani eliphakeme lezinyathelo zokukhuphuka, ezihlukahluka kusuka kwizinyathelo ezimfushane ezingxenyeni enkulu yendlela, kuya kwezinye izigaba ezinezinyathelo eziqinile impela.
Ungaphuthelwa emnyuziyamu wamatshe osanda kwedlula ihhovisi elikhulu lamathikithi ngakwesokunene, okubandakanya emihumeni emihle enobuciko be-rock ekhanyisiwe. Ukungena kumahhala.
Uma uphuthelwa yibhasi, kukhona indawo yokulala etholakala eduze nezitolo eHangirou. Kunehhovisi lemininingwane yabavakashi elihlala livulekile ngezikhathi zamahhovisi ajwayelekile, noma lingabonakala livaliwe ngenxa yokushoda kwezivakashi. Bazokwazi ukukusiza ekutholeni indawo yokuhlala enelayisense yokuthatha abokufika, uma ngabe uyidinga. Indawo eseduze ye- "Yanxi Nightless Valley" igcwele izindawo zokugcina amahlathi amancane, lapho ungakhokhela khona ithoyizi elisha elinepulazi. Hlala esigodini ngobusuku bangaphambilini, bese uqasha itekisi eliqonde ngqo kwesinye sezingxenye eziseduze zeGreat Wall ekuseni.
UHuanghuacheng esinye sezingxenye ezakhiwe kahle zoDonga Olukhulu esidale ukuthi kuthathwe ikhanda leNkosi Cai, umakhi, ngokuphatha kabi imfucuza
Lincane kakhulu kunaseBadaling naseMutianyu…. kakhulu ngaphambi kokuba kube nzima kakhulu ukufinyelela futhi kulungiswe okuncane.
Fika eShuishangcheng, ungangena endaweni yokugcina amanzi esangweni lokungena, lapho ungabona khona udonga. Kodwa-ke, ukukhuphuka odongeni, ungahamba uye endaweni yokupaka phambi komgwaqo wase-East, bese uthatha umkhondo omncane ngakwesokunxele sezindlu zangasese (ngaphandle kokudlula esangweni lokungena ukuze): uzokwazi ukufinyelela odongeni ngaphandle kokukhokha imali yokungena.
IGuikikou, iJinshanling neSimatai isekude ukusuka eBeijing kunezinye izigaba, kepha isikhathi esithe xaxa sokufika lapho siyavuzwa ngokuncishiswa okukhulu kakhulu ekubanjeni nasekugibeni kwezivakashi. Izinsizakalo nazo zikhawulelwe, kepha; qiniseka ukuthi uletha ukulethwa kwakho kwamanzi nefilimu eyengeziwe. Ingxenye eyiqiniso yoDonga (okungenani izingxenye eziseduzane neBeijing) iseSimatai; udonga lapha lungelokwakhiwa kwasekuqaleni ngokungafani neBadaling. Lezi zindawo ezintathu zingama-130 km (80 mi) enyakatho-mpumalanga yeBeijing ephakathi. I-Jinshanling ibuyiselwe kahle futhi inikeza uhambo oluyindilinga: ungena odongeni endaweni yokudlula kweZhuanduo, ungangena e Shaling pass (~ = 5 tower), emotweni yekhebula (~ = 10 tower), endaweni yedolobha laseHouchuan ( ~ = Imibhoshongo ye-13, engaphansi kohambo oluyisiyingi oluyi-4h ukusuka esangweni) noma "Ebhokisini elinemigodi emihlanu yomcibisholo eMpumalanga" (~ = Imibhoshongo ye-20, izingxenye ezimbalwa ezinde, uzophuma ngeSango LaseMpumalanga lapho ungakhona bamba ibhasi eliqonde e-3pm elibangise eWangjing West Station. Awusakwazi ukuya eSimatai usuka eJinshaling.
Ama-Jiankou Izithombe eziningi ezishicilelwe ze-Great Wall zivela kule ndawo. I-'Jankankou ', ihunyushwa ngokuthi' i-Arrow Nock 'ngesiNgisi, ngoba ukwakheka kwentaba kufana nomcibisholo, okuvuleka umgibeli okuwohlokile njengokuvuleka komcibisholo.
Kunezingxenye eziningi ezidumile zeJiankou Wall Wall, njenge- 'The Nine-Eye tower', okuwumyalezo obalulekile ngesikhathi sezimpi zasendulo. Inezendlalelo ezintathu, kanti kukhona izimbobo eziyisishiyagalolunye ezibukeka njengamehlo ayisishiyagalolunye ohlangothini ngalunye. 'I-Beijing Knot' iphuzu lomhlangano wezindonga ezintathu eziqhamuka ngezindlela ezihlukile. I-'Sky Stair ', iyisitebhisi esinemizila engemuva kokuphakama okungama-70 ukuya kuma-80 degrees. Kuholela 'Izimpukane Zokhozi Zibheke Ngaphezulu', umbhoshongo wokubuka owakhiwe eziqongweni eziphakeme. Kuyingozi kakhulu ukuthi ngisho nezinkozi kufanele zindize zibheke phezulu ukuze zifinyelele phezulu. 'I-Zhengbei tower' iyindawo efanele yokwazisa ubuhle bokuphuma kwelanga nokushona kwelanga.
IShuiguan Yakhiwe eduze kweBadaling Great Wall, i-Big Wall yaseShuiguan kwesinye isikhathi ibizwa ngokuthi 'iBallaling-Shuiguan Great Wall'. Kwenzeka kaningi ukuthi izivakashi ezingenacala ziqondiswe odongeni olukhulu lweShuiguan esikhundleni sendawo ezikuyo ekuqaleni - iBallaling Great Wall, ikakhulukazi ngezikhathi zamaholide noma zikhathi eziphakeme.
Le ngxenye yoDonga yavulelwa umphakathi e1995 ngemuva kokulungiswa. Ngaphandle kokukhuphuka udonga, ungavakashela naseGenghis Khan Palace, iThempeli Le-Buddha Temple, iLuotuo Peak (iCamel Camel) neGrand Wall Stele Forest eduzane.
UShanhaiguan, e-Old Dragon's Head, udonga luphumela olwandle. Ukufika lapho Beijing kuthatha cishe amahora we-3 ngesitimela.
IPanjiakou Reservoir - ingxenye eshisiwe yoDonga Olukhulu
IHuangyaguan - kufanelekile ukuvakasha ngokulawulwa kwamanzi okuphuma emanzini, imibhoshongo elondolozwe kahle, ukugibela inselelo nokukhanga okuhle
I-Hushan - ingahlolwa kusuka eDandong
I-Xingcheng - idolobha lamakhosi aseMing elibiyelwe ngodonga
IJiumenkou - etholakala kwi-18 km empumalanga ye "The First Pass Under izulu 'eShanhaiguan
I-Outer Wall ye-Shanxi - uLi'erkou kuya eDeshengbu, uJuqiangbu ukuya eLaoniuwan, kanye nomfula i-Yellow River
Udonga lwangaphakathi lweShanxi - iYanmenguan, iGuangwu Old City, iTungwu Pass neNiangziguan
I-Yulin neShenmu - amadolobha asebukhosini ngesikhathi sobukhosi bakwaMing
I-Eastern Ningxia Wall - Inqaba yaseHongshan neCave Gully (iShui Dong Gou)
I-North Ningxia Wall - endaweni yaseHelanshan
I-Western Ningxia Wall - uZhenbeibu noSanguankou
I-Wuwei - idolobha lamabutho
IMinqin - idolobha lase-oasis
UZhangye - ikomkhulu lamabutho
Jiayuguan - Fort Fort eJiayu Pass, eyabizwa nge- "Last Fort Under Heaven"
ILanzhou - idolobha ebelibiyelwe ngodonga manje seliyidolobha lesifundazwe saseGansu
Ukusuka eJiankou kuya eMutianyu Uma unesifiso sokuthola isipiliyoni esiyiqiniso, lolu hambo lukuvumela ukuthi uzizwe zombili “udonga lwasendle” olungaphazanyiswa, ngoba belungama uma belungekakhiwa kabusha ngokuphelele, nodonga olubuyiselwe, njengoba belungabuka kungudumo lwangaphambili. Ibhonasi eyengeziwe ikuvumela ukuthi wehle ezitebhisini zesigaba esibuyiselwe esikhundleni sokukhuphuka ngomzamo othile onzima. Ukuhamba ngezinyawo kungathatha noma kuphi ukusuka kuma-2 kuya emahoreni we-5. Hlala ubusuku ehostela esigodini saseXi Zha Zi, noma uqashe othile ukuthi akulahle eJiankou futhi akukulande eMutianyu. Lokhu kuhamba kuqala esigodini saseXi Zha Zi, ezansi kwesigaba seJiankou Great Wall. Ngemuva kohambo olude lwehora ekukhuphukeni endaweni ephakathi nendawo, umhlali wasendaweni uzocela imali yokusebenzisa isitebhisi sakhe ukugibela eJiankou Tower. Ekhanda kwesobunxele (eMpumalanga) ubheke eMutianyu, uhambo oluzokuthatha cishe amahora we-2-3, ingxenye yokuqala endaweni engavikelekile odongeni nenye esele endaweni ebuyiselwe. Ngeza ihora le-1 uma ukhetha ukukhuphuka isigaba se-Ox Horn, isigaba esinamandla kepha esihle. Qikelela ukwehla, ngoba kuyashelelisa lapho komile. Ungazami ukukhuphuka lapho kumanzi, ngoba inezindawo ezithile ezixegayo futhi ezishelelayo. Yize kungaba lula ukwenza enye indlela ngakolunye uhlangothi, ukuhamba emuva kungaba nzima kakhulu ukukuthola.
Uhamba ngeJinshanling uye eSimatai. Iningi le-Wall empumalanga ye-Jinshanling nalo alinawo amandla. Ukuhamba ibanga ukusuka eJinshangling kuya eSimatai cishe yi-10 km. Kuhamba ibanga elingakanani ebangeni kepha kuguquko olukhulu kakhulu, kepha uzovuzwa ngokubukwa okumangazayo kanye nosuku oluhle lokuzivocavoca. Lindela ukuchitha noma kuphi ukusuka emahoreni we-2.5 ukuya emahoreni we-6 odongeni, ngokuya ngezinga lakho lomzimba, isifiso sokuvelela nemvamisa yama-ops wezithombe. Uma usuphakathi kwalezi zingxenye ezimbili, akukho neze izivakashi. Eqinisweni, izivakashi eziningi zakwamanye amazwe zibonwa zenza lokhu impela kunabavakashi baseChina abavela kwamanye amazwe. Kudingeka izicathulo nezingubo zokunethezeka, ngoba uzobe uhamba ngezitini ezihambayo kwesinye isikhathi ezihlanganiswa nokukhuphuka emaweni. Amanzi nemilwelwe kufanele kube esikhwameni sakho. Kepha uzothola abanye abathengisi bendawo abathengisa amanzi futhi kwesinye isikhathi badle okulula odongeni. Uma wehla usuka eSimatai, kukhona umugqa we-zip otholakalayo. Ingama-400m, futhi ingaphezu komfula. Kuzokuyisa ezansi ngaphesheya komfula, futhi kufaka phakathi ukugibela isikebhe esifushane ukubuyisa ukuthutha komhlaba. Ngesikhathi phakathi kwalesi sikhathi sokuhamba, abaqoqi bazokukhokhisa futhi ngoba ungena kwenye ingxenye yoDonga. Uma uhamba phakathi kwezigaba, kuncane ongakwenza ngakho ngaphandle kokubuyela emuva. Unogada uthunyelwa imibhoshongo emibili empumalanga yeWord Window tower eseJinshanling ukubuyisa abahamba ngezinyawo uma kungenzeka bazama.
Bona ukushona kwelanga nokuphuma kwelanga eJinshanling Landela ngendlela efanayo kunesigaba esingenhla ukufika eJinshanling. Lapho ufika esiteshini sensiza, kufanele uthole okunikezwayo ukuze uthole indawo yokuhlala. Amanani abukeka sengathi asuka ku-50 aya ku-80 rmb umuntu ngamunye, unganqikazi ukuxoxa. Uma ungalandeli umgwaqo ohlangothini oluseningizimu empumalanga yesiteshi (kwesokunxele komhubhe), ujikela kwesokudla bese udlula ngaphansi komgwaqo omkhulu. Ngemuva kokuhamba kwe-5-8mn uzothola izivakashi. Ukukhuphuka udonga, ngemuva kwe-5pm, kufanele ukwazi ukweqa e-East Gate (10mn uhambe ngomgwaqo) futhi ugweme imali ye-65rmb. Ungacela futhi umninimzi wakho ukuthi akushayele ekungeneni main uma uphuthuma ilanga, angakubuza i-20-30rmb ukushayela futhi ulinde, futhi basakucela ithikithi ngemuva kwe5pm, noma ngabe kufanele avalelwe. Thatha indlela efanayo ubuye bese uya e-East Gate ekuseni ukuze uphume ilanga ngokubukwa okuhle. Buza umgcini wakho ukuba azi ukuthi ungene kanjani. Kungenzeka kube nendlela encane e-East esangweni lase-East. Uma ugcina uhlala esigodini saseHi Lou Gou, kungahle kube khona indlela eNtshonalanga yesango laseNtshonalanga eya.
Vakashela iGreat Wall Museum Phansi “KwaBadaling Pedestrian Street” bese ukhuphukela egqumeni ngemuva kwe- “Circle Vision Theatre” iyisakhiwo Esibonga kakhulu i-Wall Wall. Imibukiso yokuhamba ngezinyawo inikezela ngesibukezo esihle somlando wobukhosi besibaningi, kanye nezinto zobuciko eziningi ezivela ngalezo zikhathi kanye namamodeli afanele isithombe: kumawashi, ukukala ngezitebhisi, njll. Izindlu zokugezela nazo kungenzeka zihlanzeke kakhulu I-Badaling (kukhona ngisho nendlu yangasese yaseNtshonalanga). Okuhle kunakho konke, ukwamukelwa mahhala! (kuvaliwe M, 09: 00-16: 00). Ithiyetha enhle yombuthano odongeni.
Ukwehla kokugijima kwe-toboggan Isigaba se-Mutianyu sinikezela ngemigqa emibili ye-chairlift egijimela ezingxenyeni ezihlukene zesigaba se-Great Wall, esesimanjemanje esinamakhabethe e-bubble kanye nesincane sesimanje esinesihlalo esinezitezi ezimbili. Uma uzizwa ukhululekile kukho futhi isimo sezulu sisobala, ithikithi lokubuya lokuphakamisa okuncane kwanamuhla kuhle ukugibela phansi ukugijima kwe-toboggan. Noma ngabe uthanda, amathikithi angathengwa kalula ngokwahlukana kwe-toboggan Yiqiniso - vele ukhuphukele ehhovisi lamathikithi ekuqaleni kokugibela, bese uya phansi odongeni. Qaphela ukuthi amathikithi okukhuphuka abiza okufanayo kodwa awashintshashintshi. Uma ungakwazi ukufunda isiShayina hlola isithombe esethikithi, futhi uma uthola okungalungile ngesithombe samakhabethe e-bubble, akuyona inkinga ukuthi ubuyise imali yakho ngokushesha bese usiyisa kwelinye ikhawunta lethikithi.
Letha ijekete emelene nomoya noma kumakhaza ngezikhathi zonyaka. Ehlobo uzodinga amanzi amaningi, kepha kukhona abathengisi abaningi ezingxenyeni ezivakashelwe kakhulu. Zilungiselele ukuthi kungenzeka kube khona ukuduma okungazelelwe, okufushane, kodwa kunalokho okunodlame.
Musa ukushiya umkhondo wokuvakasha kwakho. Noma kungewona umbono ongajwayelekile, hlukana nesifiso sokufaka igama lakho emidwebeni osodongeni, noma uthathe ucezu uluse ekhaya njengesikhumbuzo. Uma udonga kufanele lonakaliswe ngezenzo zakho, abaphathi bangathatha isinyathelo esihle ngenhlawulo nangezinye izinhlawulo.
Ukuhamba ngezinyawo njengomdlalo wokuzijabulisa akuqondakali kahle okwamanje eChina ngakho-ke inhlonipho yokuwela izwe nezwe yangasese ayikasungulwa. Khumbula ukuthi i-Wall idaka kakhulu ngamatshe futhi ayasekelwa kahle ngamatshe, nokuthi uhlala wedwa uma ungaphandle kwezindawo ezilondoloziwe. Noma ungahambi odongeni, uzothola imizila embalwa ongayilandela futhi kwezinye izingxenye, indawo i-Wall traverses ethe mpo, inobuqili futhi ayiphephile kakhulu. Ngaphandle kwalokho, kunzima ukuthola amanzi okuphuza ahlanzekile futhi ezinye izindawo kungenzeka zingabi nawo nhlobo amanzi. Ezinye izindawo zizoba nezingqinamba ezenziwe ngabantu, njengemigwaqo nemigwaqo enezintambo eziqinile. Imizana lapho ungathola khona izinsiza zingaba zimbalwa futhi zikude phakathi. Abanye bangakuhambisa kude ngamakhilomitha oDongeni. I-cartography empofu iseyinkinga lapha ngoba amamephu angaphansi kwe-1: 450,000 akulula ukuthola ukubanjwa ngenxa yezicelo zamasosha zamamephu anjalo. Ngaphandle kwalokho, abaqondisi abazazi izindawo ezisodongeni oluKhulu bambalwa futhi baphakathi kakhulu. Into yokugcina okufanele ucabange ngayo mayelana nokuhamba nge-Great Wall ukuthi i-China ayinalo uhlelo lokuhlenga abasebenzi bezintaba / ugwadule. Uzoba wedwa uma kwenzeka kwenzeka kuwe.
Umkhonyovu - Qaphela imikhonyovu yebhasi engonakalisa usuku lwakho. Futhi zama ukugwema izinkambo ezihlelelwe i-Great Wall ezibiza i-100-150 Yuan. Lokhu kukhangiswa ngabantu behambisa amaflaya azungeze uMuzi Ovinjelwe eBeijing ngokwesibonelo (inkonzo yangempela yamabhasi eya e-Great Wall kuphela ebiza i-20 Yuan!). Futhi, umshayeli angavele ame futhi akusebenzise ngaphambi kokuya kwakho.
Ukuhamba ngokuphepha kungagijimisi njengoba ungahle uhambe okungaphumela ekulimaleni njengoba izinyathelo zingalingani.
Badaling. Kunezitimela eziningi eziya esiteshini saseBadaling. Eshibhile kakhulu futhi kulula kakhulu esiteshini saseBeijing.
Ukuhlola i-Great Wall of China kufaka ne-Ming Tombs. Abashayeli abaningi bokuvakasha noma abashayeli abazimele bazohlanganisa udonga nama-Ming Tombs ohambweni losuku. Ama-Ming Tombs awasho lutho olukhethekile futhi acacile. Izivakashi zivame ukweqa ngaphandle kokuthi ziyimfihlo yomlando waseChina.